ကစားလိင်ဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့စာကြည့်တိုက် Xxx ခေါင်းစဉ်
အပေါ်မယ့်အရာကိုဂိမ်းကစား? ဒါဟာပိုင်ရှင်မှာကစားလိင်ဂိမ်းများနှင့်ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျွန်မပြောပြချင်အားဖြင့်သင်တို့အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ထိုသို့ဖြစ်ရစေခြင်းငှါစိတ်ကူးတစ်ခုသင်တို့အဘို့အကိုဖန်တီးရန်အကောင့်တစ်ခုအဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံး။ မျှော်လင့်သင်တို့ကိုထောက်သောသင်၏အမျိုးအစားသူစိတ်ဝင်စားမယ့်ထိပ်တန်းအရည်အသွေးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံ–မ၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ဖူးလဲဖြတ်ပြီးဝက်ဘ်ဆိုက်အကြောင်းမဟုတ်ထင်သွားရောက်ကြည့်ရှု! ကျနော်တို့ရဲ့ဗဟိုအာရုံစူးစိုက်အရမ်းအစမှသိရသည်ပေးရန်သင်ဝင်ရောက်ဖို့ထိပ်တန်းဆင့်လိင်ဂိမ်းအစည်းအဝေးကအခြားနေရာရိုးရှင်းစွာနိုင်။, ငါသည်ဤအပလက်ဖောင်းလွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်ခါကျွန်မသိလိုက်ရ၍အလွန်အနည်းငယ်ရွေးချယ်မှုများထွက်ရှိပါတယ်အကြောဂိမ်းကစားကိုအလိုအလျောက်အခါငါတို့ပြီးပြည့်စုံသောပေါင်းစပ်အကြားလိင်နှင့်ဂိမ်းကစား။ ယနေ့အချိန်တွင်၊ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်မိကြောင်းအစီရင်ခံပြီအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု၏ခေါင်းစဉ်နှင့်အနေလျှင်သင်အမှန်တကယ်ရှာဖွေနေအပေါ်သင်၏လက်ကိုရဖို့အချို့ကမ္ဘာ့အဆင့်မီဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူညစ်ညမ်းအအာရုံစူးစိုက်၊အဘယ်သူမျှမဖြစ်သွားနိုင်ရန်အကြောင်းများကိုသင်ဖို့အတော်လေးငါတို့ကဲ့သို့။ အကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာသင်ယူချင်ကစားလိင်ဂိမ်းများနှင့်အပေါငျးတို့သကုသရန်ရှိသည်ကိုဆက်ကပ်? ပေါ်မှာဖတ်–ပေးမယ်အပြည့်အဝကြည့်ရှုအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကရရှိပါသည်နှင့်အဘယ်ကြောင့်ကျနော်တို့ဤမျှလောက်ကြီးစွာသော!
ကစားလိင်ဂိမ်းများအလွန်ကြီးကျူးလွန်ဖို့စိတ်ကူးဂိမ်းရှိခြင်းအမှန်တကယ်အစားကောင်းနဲ့ပျော်စရာဖြစ်။ ဟိုအကြောင်းရင်းကိုဖန်ဆင်းခြင်းအားလုံး၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းသူတို့ဖြစ်ဖို့အတော်ပင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်သူတို့အရွယ်ရောက်ပြီးသူ။ ဤသည်ကိုဆိုလိုသည်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးတဲ့မေးခွန်းအားလုံးအချိန်:မယ်လို့တစ်စုံတစ်ဦးကစားလျှင်ဤသူတို့သွားကြသည်မဟုတ်ပယ်တွင်လူရှုပ်ဖို့? ဆိုရင်အဖြေက'ဟုတ်ကဲ့'၊ဒါဟာတော်တော်လေးသိသာပုံရတယ်အဆုံးရလဒ်ဖြစ်မည်ဟု၎င်းတို့၏ဆန္ဒကစားရန်တစ်ချိန်ကသူတို့အမှန်တကယ်ရှိနေသည်ကားအကျိုးကိုအဖြစ်ပေးထားဖို့ထွက်အဆိုပါဂိမ်းကစားကိုအဘယ်သူသည်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှု!, ကစားလိင်ဂိမ်းများသည်အလုပ်လုပ်ကိုင်နာရီတဝိုက်ကိုရောက်စေဖို့ရှိပါတယ်ထွက်လူအကောင်းဆုံးဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်သာ၊ဒါပေမယ့်ပျော်စရာ။ အဘယ်ကြောင့်ဤသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်အရေအတွက်အမျိုးမျိုး၏ဂိမ်းသင်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်နှင့်လေးမြတ်တန်ဖိုးထား။ ကျနော်တို့ရရှိပါသည်ချိန်းတွေ့ simulators၊RPGs၊ပလက်ဖောင်းနှင့်အကြား၌ရှိသမျှကို။ လို့ပြောလုံလောက်နေမယ်ဆိုရင်တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူအထင်အမျိုးမျိုးနှင့်အရည်အသွေးအရေးကြီးအချက်များမှကြွလာသောအခါတစ်ဦးပွဲချင်းတူကစားလိင်ဂိမ်းများ၊သင်ဖြစ်နိုင်လက်ျာဘက်င့်!
တစ်ခုမှာအရေးကြီးဆုံးအရာကဒီမှာအကြှနျုပျတို့မှာကစားလိင်ဂိမ်းများဖြစ်ပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလူတွေတက်လက်မှတ်ထိုးရန်နှင့်ပျော်မွေ့သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်မပါဘဲသြင္းအဘို့ထိုသူတို့နှင့်အပျော်အပါး။ ငါဖန်ဆင်းအဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက်မယုံနိုင်လောက်အောင်အစောပိုင်းတွင်အပေါ်လမ်းလျှောက်ရန်ဤလမ်းကြောင်းကိုဆင်းပြီးပြုသောကောင်းသောအကြောင်းပြချက်:အလွန်းအများအပြားဂိမ်းများရှိသည်ဝယ်ယူအတိတ်အတွက်အတက်အဆုံးသတ်ခြင်းလုံးဝကြောက်မက်ဘွယ်။ တဦးတည်း၏အတောက်ပသောအမှုအရာပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ဂိမ္းထဲကအခမဲ့အဘို့အလျှင်သူတို့တွေ့ဆုံနိုင်သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များ၊အခွင့်အလမ်းကောင်းရှိပါတယ်လိမ့်မယ်အဲဒီတော့ဘယ်တော့မှပြန်လာ။, အားဖြင့်ဤမက်ထရစ်၊ကျနော်တို့အောက်တွင်တစ်ခုအစွန်းရောက်ပမာဏ၏ဖိအားကိုသေချာစေရန်အကြောင်းဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံများကိုသင်အမှန်တကယ်ဟု့–တို၏အကြောင်းဖြစ်သွားသည်အကြွင်းမဲ့စွန့်ပစ်အချိန်။ ကစားလိင်ဂိမ်းများလိမ့်မည်မြဲသမျှအတိုင်းပြုနိုင်မှုအရာတို့ကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အမြတ်အစွန်းသည်ငါတို့အဘို့အလွန်း၊ဒါပေမယ့်မဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့ပူဇော်အနိုင်ရမှပေးဆောင်စက်သို့မဟုတ်အချိန်ဂိတ်ကဆို၏။ အဆိုပါဂိမ္းတင်းကြပ်စွာအနားမှကြွလာသောအခါပေးဆောင်ရသည့်အားသာချက်–ဤအလာသင့်ဖြစ်ကြိုဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်သူတွေကိုအသုံးပြုကြသည်အခြား freemium ဝန်ဆောင်မှုများကိုထွက်ရှိပါတယ်၊အထူးသဖြင့်သူတို့အတွက်မိုဘိုင်း။, ဖြစ်ခြင်းနေသော်လည်းတစ်နေရာကပတ်ပတ်လည်အခြေလိင်၊ကျွန်မတို့ဟာအရမ်းကြီးလေးစောင့်ရှောက်ကစားလိင်ဂိမ်းများအရိယာခရီး!
က်ေဝေးလွန်းအချိန်အများကြီးသားတက်၊နှင့်အစဉ်ကိုဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့အရှိန်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်၊ကျွန်မအထင်ဒါဟာဘေးကင်းလုံခြုံကြောင်းပြောဖို့အကောင်းဆုံးချဉ်းကပ်မှုသင်တို့အဘို့အရုံရှေ့ဆက်သွားနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရဖို့လက်လှမ်းဒေတာဘေ့စဖို့ရှိသည်ဖို့မလိုဘဲမဖတ်တော့ဘူး။ သတိရသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုဖန်တီးဒီမှာကုန်ကျစရိတ်စာသားချည်းလျှင်၊ဒါကြောင့်သင်စရာမမွာအတူစုဆောင်းခြင်း XXX ဂိမ်းအတွင်း၊သင်ချက်ချင်းထွက်ခွာနှင့်ဘယ်တော့မှပြန်ကြည့်!, အခါင္ကလုပ်ငန်းစဉ်တွေသာလိုအပ်တဲ့အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်:ဖွင့်ပြီးတာနဲ့အတည်ပြုသင့်အသက်အရွယ်နှင့်အသင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ၊သင်သှားဖို့ကောင်းနေ! ဒါကြောင့်တကယ်:အဘယ်ကြောင့်သင်ပြီးသားကြပြီမဟုတ်သူများကဖန်တီးအကောင့်တစ်ခုဒီမှာင့္လွစ္လာတွင်းကစားလိင်ဂိမ်းများ? စာဖတ်ခြင်းများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်–ယခုရကုန်အံ့သင်သည်အပြာဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံသင်အမြဲလိုခငျြတော့!